Vol. 13 SEPTAMBRA, 1911. Tsia
Copyright, 1911, avy amin'ny HW PERCIVAL.
Ny siansa MODERN dia nanaiky hatramin'ny farany ny Flying ao amin'ny fianakaviany ny siansa hajaina, eo ambanin'ny anarana pneumatics, aerostatics, aeronautics na aviation. Ny mekanika Flying dia mety hianarana sy hampihatra izay lehilahy mendrika fa tsy manana ny maha izy azy ny siansa.
Nandritra ny taonjato maro dia nisy lehilahy mahay sy mendrika, niaraka tamin'ny mpaka mody sy mpandray anjara mahafinaritra teo amin'ireo nitaky ny fahalalana ny siansa manidina. Mandra-pahatongan'ity siansa ortodoksa ity dia niady sy nitana ny saha tamin'izy rehetra. Izy io dia efa ela no niady. Ny lehilahy manana fahamendrehana dia iharan'ny fanamelohana na fanaratsiana toy ny charlatan sy fanatanjahan-tena. Ilay mpanamory sidina izay manidina eny an-drivotra na miakatra sy mianjera, tadio na dartso na mijery an-tariby sarin'olona tsara tarehy talohan'ny nahitana mpijery dia afaka manao izany noho ny andiam-behivavy marobe, tonga hatramin'ny taonjato maro ka hatramin'izao, izay nanao ny fahombiazany azo atao. Niaritra fanesoana sy sivana be dia be nomena izy ireo; Mahazo valisoa be dia be izy ary mahazo fiderana be dia be.
Ny siansa manidina dia tsy raisina an-tsehatra ary tsy nampidirina ho tafiditra ao anatin'ny faribolana ara-tsiansa fantatra ary ny vazaha nomena azy dia mitondra ny lohateny hoe manaja ara-tsiansa. Ny lehilahy amin'ny siansa nekena dia nanaiky ny siansa manidina amin'ny isa satria tsy maintsy voatery. Noporofoina ny sidina ary noporofoiny ho toy ny zava-misy, ary tsy azo nolavina intsony. Nekena àry izany.
Ny teoria tsirairay dia tokony atolotra ny fitsapana ary voaporofo alohan'ny ekena fa tena marina. Izay marina sy ho an'ny tsara indrindra dia hitohy ary handresy ny fanoherana rehetra amin'ny fotoana. Saingy ny fanoherana izay aseho amin'ny zavatra maro ivelan'ny zavatra voafetran'ny siansa voafetra, manakana ny saina hiofana amin'ny eritreritra ara-tsiansa tsy handray soso-kevitra ary hitondra fahatsapana ny eritreritra sasany izay tena natao tamin'ny olona.
Ny toe-tsainan'ny siansa nahazoana alalana - ny hifantoka amin'ireo lohahevitra any ivelany nefa tsy ekena - dia fanamarinana momba ny fampitomboana sy ny herin'ny hosoka sy ny fanatanjahan-tena, izay mitombo toy ny tsimparifary amin'ny herin'ny sivilizasiona. Raha tsy noho io toe-tsaina siantifika io, ny hosoka, fanatanjahan-tena ary peste pretra, toa ny ahidratsy ratsy, mitombo ary manaloka, ny olona manintona na manaitaitra ny sain'olombelona, ​​hanova ny zaridainan'ny sivilizasiôna ho lasa kianjan'ny fisalasalana sy tahotra ary hanery azy ireo. ny saina hiverina amin'ny tsy finoana gony any amin'ny finoana any an-toerana izay nitarika ny siansa ny zanak'olombelona.
Raha jerena ny tsy fahalalàna izay misy amin'ny ambaratonga samihafa dia azo atao, angamba, tsara indrindra fa ny manam-pahefana siantifika dia tokony tsy hikambana amin'ny zotram-pitsikilovana ary handà lohahevitra na zavatra ivelan'ny fetra voafetra. Amin'ny lafiny iray hafa, io fihetsika tsy mendrika io dia manakana ny fitomboan'ny siansa maoderina, ny fahatongavan-java-dehibe momba ny fananganana tokony hatao amin'ny saha vaovao, enta-mavesatra ny saina amin'ny fitsarana an-tendrony tsy misy fotony ary izany koa dia miaro ny saina tsy hahita ny làlany amin'ny alàlan'ny eritreritra ny fahalalahana.
Tsy ela akory izay dia namerina ny hevitry ny mpahay siansa nanesoeso na nanameloka ireo izay hanamboatra milina manidina. Niampanga izy ireo fa ny mpanidina tsy ho mpanonofy. Izy ireo dia nitana ny fiezahan'ireo mpanamory fiaramanidina dia tsy nisy nandaina akory, ary ny angovo sy ny fotoana sy ny vola mbamin'izay ezaka tsy misy ilana azy dia tokony hivadika ho fantsona hafa hahazoana vokatra azo ampiharina. Naverin'izy ireo hatrany ny fifamalian'ny manampahefana mba hanaporofoana ny tsy fahazoana sidina an'habakabaka ataon'ny olona.
Sidina sy siansa izao ny sidina na manidina. Ampiasain'ny governemanta izy io. Izy io no haingo farany ananan'ireo mpanao fanatanjahantena sahy. Olana ara-barotra sy tombotsoam-bahoaka io. Ny valin'ny fivoarany dia voamarika tsara ary ny ho aviny andrasana tamim-pahatokiana.
Ankapobeny izao dia misy zavatra tokony holazaina ho fiderana ny "vorona-olombelona," ny "vorona," ny "aviatera", ary ny masin'izy ireo. Raha ny marina, ny vaovao momba ny pneumatics, aerostatics, aeronautics, aviation, fly dia ny lehibe indrindra sy farany manintona izay natolotry ny diary ho amin'ny tontolo mahaliana.
Ireo hevitra marim-pototra amin'ny resaka pubis ity dia alohan'ny zava-misy sy ny hevitry ny besinimaro hanova ny fomba fijeriny. Tian'izy ireo ny hanome ny besinimaro ny fanirian'ny besinimaro. Tsara ny manadino ireo antsipirihany sy ny fiovan'ny hevitra amin'ny fahadim-potoana. Na izany aza, izay tokony hiezaka ny ho tonga velona sy ny tokony ho tadidiny dia ny tsy fanajana ny fitsarana an-tendrony sy ny tsy fahalalany mandrakizay ny fitomboana sy ny fivoaran'ny saina ary tsy hampitsahatra ny herin'ny fiteniny. Mahatsiaro ho matanjaka ny olona amin'ny fiheverana fa ny heriny sy ny fahafahany ho tsara indrindra dia miasa raha miasa tsara amin'ny eritreritra sy ny asa atao amin'izay heveriny fa azo atao sy tsara indrindra izy. Ny fanoherana atolotry ny fitsarana an-tendrony sy ny hevitry ny besinimaro dia afaka manakana ny fivoarany. Hanjaka ny fitsarana an-tendrony sy ny fiheverana fotsiny rehefa miharihary ny mety hiseho. Mandritra izany fotoana izany, ny mpanohitra rehetra dia manolotra fotoana hampivelarana tanjaka ary ilaina amin'ny fitomboana.
Mandritra ny fotoana feno fanajana, ny fisaintsainana lalina, ny hafanam-po, ny olona, ​​ny saina, mahalala fa afaka manidina. Amin'ny fotoan'ny filokana, amin'ny fihainoana vaovao mahafaly, rehefa milomano tsara ny fofonaina ary avo be ny onja, dia tsapany ho toy ny afaka miakatra ambony sy miroborobo mankany amin'ny habakabaky ny manga tsy fantatra izy. Avy eo mijery ny vatany mavesatra izy ary mijanona eto an-tany.
Ny kankana dia mandady, mihodina ny kisoa, milomano ny trondro ary manidina ny vorona. Isaky ny teraka izy dia teraka. Saingy rehefa afaka kelikely dia tsy afaka manidina na milomano, tsy mandeha na mandady ny biby. Ny tena azony atao dia ny mandady sy mitsoka ary hidina. Volana maromaro aorian'ny fiterahana dia mianatra mandady izy; avy eo nanao ezaka be dia be izy namihina ny tanany sy ny lohalika. Taty aoriana sy rehefa avy be dia be ny fianjerana ary nianjera dia afaka mijoro. Ary tamin'ny farany, tamin'ny alalàn'ny ray aman-dreny sy tamin'ny fitarihany be dia be izy. Mety handalo taona maromaro alohan'ny nianarany hilomano, ary ny sasany mbola tsy nianatra mihitsy.
Ankehitriny rehefa nahavita ny fahagagana fiaramanidina an'olombelona ny olona, ​​dia toa hoe rehefa manao sidina an'habakabaka amin'ny alàlan'ny mekanika izy, dia ho tonga amin'ny fetra mety ho vitany amin'ny zavakanto manidina. Tsy izany anefa. Izy dia tsy maintsy ary hanao zavatra betsaka kokoa. Raha tsy misy fifandirana madiodio, tsy miraikitra ary irery, amin'ny vatany tsy misy fizahana, ny olona dia manidina amin'ny rivotra amin'ny sitrapo. Ho afaka miakatra avo lenta izy amin'ny alàlan'ny fakan'ny fofonainy, ary hitari-dalana sy hanara-maso ny sidiny ho mora tahaka ny vorona. Amin'ny fomba haingana izany dia miankina amin'ny eritreritra sy ny ezaka ataon'ny olombelona. Mety amin'ny ankamaroan'ny olona miaina ankehitriny. Amin'ny vanim-potoana ho avy dia ho afaka hahazo ny zavakanto manidina ny lehilahy rehetra.
Tsy toy ny biby ny olombelona no mianatra ny fampiasana ny vatany sy ny sainy amin'ny alalan'ny ampianarina azy. Ny olombelona dia tsy maintsy manana lesona momba ny lesona na ohatra, alohan'ny hanaiky azy ireo sy hanandrana izay azo atao ho azy ireo. Ho an'ny milomano sy manidina, ny lehilahy dia nanana ny trondro sy ny vorona ho lesona lesona. Raha tokony hiezaka ny hahita ny hery na angovo ampiasain'ny vorona amin'ny sidina izy ireo, ary ny fianarana ny zava-kanto fampiasana azy, ny lehilahy dia nanandrana hatrany hamorona fifandirana mekanika ary hampiasa izany amin'ny sidina. Ny lehilahy dia nahita ny fomba fanidinan'ny mekanika, satria efa nieritreritra sy niasa ho azy ireo.
Rehefa nijery vorona teo amin'ny sidina ny olona dia nieritreritra azy ireo ary te hisidina fa tsy nanana fahatokisana azy. Manana toky izy ankehitriny rehefa misidina. Na dia modely manaraka ny fomba fanaon'ny vorona aza izy dia tsy manidina tahaka ilay vorona, ary tsy mampiasa ny hery ampiasain'ny vorona koa izy.
Raha tsapany ny lanjan'ny vatany ary tsy fantany ny toeran'ny eritreritra na ny fifandraisany amin'ny sainy, ny lehilahy dia ho gaga amin'ny fisainana ny sidina an'habakabaka amin'ny alàlan'ny vatany ihany. Amin'izay dia hisalasala izy ireo. Azo inoana fa hampiana fanesoana ny fisalasalana izy ireo, ary asehony amin'ny tohan-kevitra sy ny traikefa fa tsy azo atao ny sidina olombelona. Saingy andro iray dia misy lehilahy iray sahy kokoa sy mahay kokoa noho ny ambiny hanidina, tsy misy fomba ara-batana hafa noho ny vatany. Amin'izay dia hahita sy hino ny olon-kafa; ary, hahita sy mino, hanitsy ny fisainany ny masony ary hanidina ihany koa izy ireo. Avy eo ny lehilahy dia tsy afaka hisalasala intsony, ary ny sidina maha-olona tsy an-dafy dia ho zava-misy ekena, toy ny fahita fahita amin'ny hery mahafinaritra antsoina hoe gravitation sy fahazavana. Tsara izany misalasala, fa tsy hisalasala be loatra.
Ny hery manosika ny vorona rehetra dia tsy noho ny fikosokosoka na fiverenan'ny elany. Ny hery manosika ny sidin'ny vorona dia hery manokana ananan'izy ireo, izay hahafahan'izy ireo manao sidina lava maharitra, ary ahafahany mivezivezy amin'ny alàlan'ny rivotra raha tsy misy ny fikopahana na ny elatry ny elany. Mampiasa ny elany ny vorona mba handanjalanja ny vatany, ary ny rambony ho toy ny familiana hitarika azy amin'ny sidina. Ireo elatra dia ampiasaina koa hanombohana sidina na famporisihana ny hery manosika.
Ny hery izay ampiasain'ny vorona dia manidina amin'ny olombelona tahaka ny vorona. Na izany aza, ny olona dia tsy mahalala an'izany, na raha fantany ny hery, dia tsy fantany ny fampiasana azy.
Ny vorona dia manomboka ny fandosirany amin'ny alàlan'ny fidirana, amin'ny fanalavana ny tongony ary amin'ny fanelezana ny elany. Amin'ny alàlan'ny fofonainy, ny tongony sy ny elany, dia manentana ny taovany eo aminy ny vorona, mba hampidirana azy amin'ny fepetra iray. Rehefa ao anatin'izany toe-javatra izany dia manosika ny hery manosika ny sidina izy ireo hanao hetsika amin'ny alàlan'ny rafi-piarahamoniny. Rehefa manosika ny herin'ny vorona ny hery manosika azy. Ny lalan'ny sidina sy ny rambony no tarihin'ilay sidina. Ny hafainganam-pandehany dia voafehin'ny fihenjanana nerve sy ny volume ary ny fofon'aina.
Tsy manidina amin'ny alàlan'ny elany ihany ny vorona raha tsy amin'ny alàlan'ny fahasamihafana amin'ny elany raha ampitahaina amin'ny lanjan'ny vatany. Ny tena marihina fa misy ny fihenan'ny haben'ny elatra na ny elatry ny vorona raha ampitahaina amin'ny fitomboan'ny lanjany. Ny vorona misy elatra lehibe sy vatana maivana dia tsy afaka manidina haingana na haingana raha toa ny vorona izay kely kely ny elany raha oharina amin'ny lanjany. Ny mahery sy mavesatra ilay vorona dia kely kokoa noho ny elatry ny elany amin'ny sidiny.
Ny vorona sasany dia maivana raha oharina amin'ny fiparitahan'ny elany. Tsy noho izany izy ireo satria mila ny elatry ny sidina izy ireo. Satria ny elany lehibe dia mamela azy ireo hitsangana tampoka ary handrava ny herin'ny fianjeran'izy ireo tampoka. Ny vorona ny sidina lava sy haingana ary ny fahazarana tsy mila azy ireo hitsangana sy hianjera tampoka dia tsy mila ary matetika tsy manana elatra lehibe.
Porofo iray hafa fa ny hery manosika ny sidin'ny vorona dia tsy noho ny velarany sy ny mekanin'ny elany, fa rehefa mila fotoana ilay fotoana dia mitombo ny hafainganam-pandehany ary misy fihenan'ny elatry ny elany fotsiny aza. amin'ny elatry ny elatra na inona na inona. Raha miankina amin'ny fihetsiketsehana elatry ny sidina ny fitomboan'ny hafainganam-pandeha dia miankina amin'ny fiakaran'ny elatra iray. Ny hoe ny hafainganan'ny hafainganana dia mitombo be tsy misy fihenan'ny elatry ny elatry ny elany. Porofon'izany fa ny mihetsika dia nateraky ny hery hafa noho ny fihenan'ny hozatry ny elany. Ity antony iray hafa mahatonga ny sidina ity no antony manosika ny sidina.